I-China i-4 oz 100ml I-Stripe Ecacileyo Yeglasi yokuThulula iJar kunye nomzi mveliso weLid kunye nabaxhasi | IHoyer
Uyilo oludumile lomtya ukunqanda ukutsiba kude, kube lula ukubamba, udonga oluqinileyo lwenza ukuba luzinze kwaye luhlale, lukhuni ukuluqhekeza, ungakhetha ukufumana iithegi kunye nentambo ukuba ufuna ukuyenza yahluke ngakumbi.
Umthamo: I-100ml / 4 oz
Ukuphakama: I-55mm / 2.16 intshi
Intamo: I-50mm / 1.97 intshi
Uyilo: Uyilo oludumileyo lomtya ukunqanda ukuntywila, lula ukubamba, udonga oluqinileyo lwenza ukuba luzinze kwaye luhlale, lukhuni ukwahlukana nalo, ungakhetha ukufumana iithegi kunye neentambo ukuba ufuna ukuwenza wahluke ngakumbi.
Umgangatho: Iglasi yenziwa ngezinto ezi-soda-lime, I-LEAD-MAHHALA, ayinabungozi, kwaye ikepusi yeplasitiki i-BPA-MAHHALA, zombini ungamanqanaba okutya. Ingqukuva iipesenti ezili-100 kunye nebhotile, ukuze ukutya kwakho kungatywinwa nge-100% ngokuqinileyo kwaye akukho nto inokuvuza. Ngale seti, xa ubeka ukutya kwifriji, inokugcinwa ngokwenene ixesha elide.
Ukusetyenziswa: Kukhetho oluhle ukugcina i-pudding, imango, jam, ubisi, ubusi, ukutya komntwana, iswekile, ikhukhi, iimbotyi, amandla, njalo njalo, kwaye ungayidlala ngeethegi kunye nentambo, sisipho esihle kakhulu eso ipati, umtshato okanye ukutyelelwa, zininzi iindawo onokuthi uzisebenzisele zona.
I-Eco-friendly: Le seti iyaphinda iphinde isebenze kwaye iphinde yenzeke kwakhona, emva kokuba izinto ezikuso zisetyenzisiwe, icoceke nje, emva koko unokuqhubeka nokusebenzisa okunye ukutya, okulunge kakhulu. Ingasetyenziselwa ixesha elide kakhulu, eneneni kuneendleko eziphezulu.
Ubungakanani Umthamo: 100ml Ukuphakama: 55mmUbubanzi: 55mm Intamo: 50mm Umthamo: I-4 oz Ukuphakama: I-2.16 intshiUbubanzi: 2,16 intshi Intsimbi: 1.97 intshi
Edlulileyo: I-2 oz Round Amber yeCmetic Car Jar
Okulandelayo: I-7 oz 200ml ejikeleze iGlasi yokutsala iJar yeGlasi yeYogurt Jar ngeLid
iglasi yokuhombisa ngebhotile ngesivalo